Dhimashada qaraxii maanta oo korortay iyo sida dadka loogu qaybiyay isbitaallada | Caasimada Online
Home Warar Dhimashada qaraxii maanta oo korortay iyo sida dadka loogu qaybiyay isbitaallada
Dhimashada qaraxii maanta oo korortay iyo sida dadka loogu qaybiyay isbitaallada
Muqdisho (Caasimadda Onliine) – Waxay faah faahin ka soo baxaysaa sida isbitaalada Magaalada Muqdisho loogu kala qaaday dadkii maanta ku waxyeeloobay weerarkii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay Galbeedka Magaalada Muqdisho.
Wariyaal ka tirsan warbaahinada Muqdisho ayaa tagay qaar ka mid ah Isbitaallada magaalada Muqdisho si loo ogaado khasaaraha rasmiga ee ka dhashay qaraxa.
Inta badan maamulka iyo shaqaalaha Isbitaallada Muqdisho ayaa si wacan u qaabilay, xogna la wadaagay warbaahinta marka laga reebo maamulka isbitaalka Shaafi oo diiday iney sheegayaan dadka la soo gaarsiiyey, kuna sheegay mid sir ah.
Isbitaal Madiina: Dhimasho waxaa ay noogu sheegeen ilaa 73 qof halka dhaawacu uu yahay 53 qof.
Isbitaalka Kalkaal waxaa ay noo xaqiijiyeen in la soo gaarsiiyey ilaa 11 qof oo dhaawac ah.
Isbitaalka Somali Sudanes: waxaa ay sheegeen in la keenay hal meyd ah iyo 19 qof oo dhaawac ah, oo 4 halis tahay.
Dhankooda Isbitaalka Digfeer waxaa ay sheegeen in la keenay 4 Dhimasho iyo 37 dhaawac.
Isbitaalka Daarul Shifa waxaa ay xaqiijiyeen ilaa 5 dhaawac in la gaarsiiyey.
Waxaa sidoo kale jira dad kale oo aan la geyn isbitaallada, ama aan la ogeyn. Inkasta oo weli lasii wado baarista khasaaraha laakin si horudhac waxaan ogaannay in tirada dhimashadu ay gaartay 79 qof iyo dhaawaca oo ah 125 qof.
Si kastaba, ha ahaatee qaraxa ka dhacay isgoyska Ex Koontarool Afgooye ayaa la qiyaasayaa inuu la mid noqon karo kii ka dhacay Isgoyska Zoobe, marka loo eego xajmiga qaraxa goobta uu ka dhacay oo ah mid mashquul badan.